Uyenza njani isalathiso sendlela kwiLizwi: Icacisiwe inyathelo ngenyathelo | Iindaba zeGajethi
Kukho ezinye iinkqubo esizisebenzisa phantse yonke imihla kwikhompyuter yethu. IMicrosoft Word yenye yazo, ibalulekile kubomi bemihla ngemihla bezigidi zabasebenzisi. Nokuba yeyomsebenzi okanye yezifundo, kuqhelekile ukuba kufuneka sihlele uxwebhu sisebenzisa le nkqubo. Siyabulela kuyo sinokufikelela kwimisebenzi emininzi, nangona kuhlala kukho izinto ezithile ezihlala zibonisa ubunzima kubasebenzisi abaninzi xa beyisebenzisa.
Ukwenza izalathiso kwiLizwi yinto ehlala ibonisa iingxaki kubasebenzisi abaninzi. Nangona kuyinto esinokuyenza ngendlela elula ngokwenene. Okulandelayo siza kukuxelela ukuba singazenza njani izalathiso kumhleli woxwebhu, ngalo naliphi na ithuba apho kufuneka sizisebenzise khona.
1 Guqula ifomathi yezihloko
2 Yenza isalathiso kwiLizwi
3 Yenza ngokwezifiso isalathiso
Guqula ifomathi yezihloko
Ngaphambi kokuba uqale ukwenza isalathiso kuxwebhu olukwiLizwi, kubalulekile ukuba sisebenzise ifomathi echanekileyo kwizihloko ezikulo. Into eqhelekileyo kukuba xa sihlela uxwebhu, sisebenzisa izihloko kwicandelo ngalinye kunye namacandelwana akulo. Kodwa kubalulekile ukuba sisebenzise ifomathi efanelekileyo, esele sinayo kuxwebhu (Isihloko 1, Isihloko 2, njl.njl.). Kuba isalathiso sisekwe koku ngexesha lokuyilwa.
Ke ngoko, ukuba sele sinezi fomathi zisetyenzisiweyo kuxwebhu, emva koko ukwenziwa kwesalathiso kuyakuba lula kakhulu. Kuba isalathiso siyakuthatha ezi zihloko ukwenza amanqanaba kwaye ziya kuboniswa ngqo kwiscreen. Ke asizukuyenza enye into ngale ndlela, sikhululekile.
Ke kulungile ukuya kolu xwebhu kwiLizwi kwaye usebenzise ezi fomathi kwizihloko eziziintloko nganye kwicandelo elikulo. Indlela yokwenza kulula kakhulu, njengoko ubona kwifoto. Kuya kufuneka ukhethe isihloko okanye inqanaba oza kulisebenzisa, ukuze lisetyenziswe. Ukwenza oku kuya kusinceda ukuze isalathiso ekubhekiswa kuso silungiselelwe ngokugqibeleleyo xa siyidala, ke igcina ixesha elininzi koku. Nje ukuba siyiguqule le nto, sikulungele ukwenza isalathiso esichaziweyo.
Ungaliguqula njani iLizwi libe yiPDF
Yenza isalathiso kwiLizwi
Xa sele senzile la manyathelo kwicandelo elidlulileyo, sikulungele ukuqala ukwenza isalathiso kwiLizwi. Amanyathelo ekufuneka elandelwe alula kakhulu kweli nqanaba. Ngaphambi kokuba uqale, kubalulekile beka isalathi ekuqaleni koxwebhu. Kuba isalathiso senziwe kwindawo apho ikhesa ikhoyo, sinokwenza ngempazamo kungene embindini wolu xwebhu. Nje ukuba sibeke ikhesa ekuqaleni, singaqala.
Eyokuqala ekufuneka siyenzile kukucofa kwindawo ekubhekiswa kuyo, ebekwe phezulu kuxwebhu kwiLizwi. Ukucofa kuyo kuya kubonisa ukhetho kweli candelo. Sijonge ngezantsi kwicala lasekhohlo lesikrini, apho sibona ukhetho ekuthiwa sisiqulatho. Cofa kuyo, kwaye kuya kuvela imenyu yeemeko.
Emva koko siya kuba nakho ukubona ukuba kuvela iimodeli zesalathiso ezimbalwa, esinokuthi sikhethe kuzo. Kuya kufuneka ukhethe enye yazo, ukuze emva kwemizuzwana embalwa kuboniswe kuxwebhu lweLizwi. Ngokuyikhetha, uya kubona ukuba izihloko okanye amacandelo ebesikhe sawadala sele ebonakalisiwe kwisalathiso esichaziweyo. Ke akufuneki songeze nantoni na ngesandla. Ndikhululekile kakhulu malunga noku. Ngapha koko, njengoko sisongeza izihloko ezitsha, ziya kufakwa ngokuzenzekelayo kwisalathiso esichaziweyo.
Ke ngoko, lonke utshintsho esilungenisayo kolu xwebhu, njengenombolo yephepha apho isahluko esithile siqala khona, olu tshintsho luya kuboniswa kwisalathiso. Ke yonke into izakulunga malunga noku. Into eqhelekileyo kwezi meko kukuba esi salathisi sifakwe kuxwebhu kwiLizwi ekugqibeleni, xa sigqibile ukuhlela, ukwenza yonke into ibe lula ngale ndlela. Ikwabonelela ngamathuba okuyihlela ekuqaleni. Ngamnye kufuneka akhethe ukhetho olubonakala lukhulu kwimeko nganye.
Ungayiguqula njani i-PDF kwiLizwi
Yenza ngokwezifiso isalathiso
Nasiphi na isalathiso esisenzileyo kuxwebhu olukwiLizwi singenziwa ngokwezifiso. Umsebenzi ubonelelwa bona, ukuze umsebenzisi ngamnye abe nakho ukwenza ngokwezifiso uxwebhu abalwenzileyo. Indlela yokungena kulo msebenzi ilula kakhulu, iyafana namanyathelo esiwasebenzisileyo ukuyila.
Ke ngoko, kufuneka singenise icandelo lereferensi ngaphezulu kwesikrini. Okulandelayo, nqakraza kwiqhosha kwitafile yemixholo, ukuze imenyu yokuqulathiweyo kweli candelo iboniswe. Emva koko kufuneka singene kukhetho olubizwa «Uluhlu lweSiko lesiqulatho», ebekwe esiphelweni semenyu yokuma. Iwindow entsha emva koko ivula kwiscreen.
Kule festile sinoluhlu lwezinto esinokuzenza ngokwezifiso esi salathisi esiza kusisebenzisa kwiLizwi. Izinketho eziboniswe kule festile zi:
Bonisa inombolo yephepha: Ukuba sifuna ukuba le index ibonise iphepha apho isahluko siqala khona
Ukusetyenziswa kwee-hyperlinksSingasebenzisa ii-hyperlink kwizalathiso zezihloko, ukuze ukucofa kwenye kusise kwiphepha elichaphazelekayo. Inokuba luncedo kakhulu, ngakumbi kumaxwebhu amade, ikwenza kube lula ukuhambahamba.
IfomathiSingakhetha kwakhona ifomathi esifuna ukuyisebenzisa kwizalathiso zezihloko, kukho iindlela ezininzi onokukhetha kuzo ukuze ukwazi ukwenza isalathiso esichaziweyo ngalo lonke ixesha.
Bonisa amanqanabaKuyenzeka ukuba ukhethe inani lemigangatho esifuna ukuyibonisa kwisalathiso kwiLizwi. Le yinto exhomekeke kumanqanaba esiye sawasebenzisa kwezi zihloko kuxwebhu. Ukuba sisebenzise isihloko 1, 2, 3, 4, emva koko kuya kufuneka sisebenzise amanqanaba amane. Kufuneka ilungiselelwe ukusetyenziswa kwezi zihloko.
Nje ukuba utshintsho esilufunayo luziswe, singakunika ukuba wamkele kwaye isalathiso ekubhekiswa kuso siye safuna. Sele siluprintile uxwebhu okanye siluthumela ngeposi, okanye nantoni na ekufuneka siyenzile ngalo. Njengoko ubona, ukwenza isalathiso kwiLizwi akunzima.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Uyenza njani isalathiso sendlela kwiLizwi